Waa kee waddanka ‘xaday’ magacii warshadda kalluunka ee Laasqoray | Biyoguurenews.com
Home Wararka Waa kee waddanka ‘xaday’ magacii warshadda kalluunka ee Laasqoray
Waa kee waddanka ‘xaday’ magacii warshadda kalluunka ee Laasqoray
Wax soo saarkii kalluunka ee warshadda Laasqoray ayaa in muddo ahba hakad ku jira, laakiin waxaa soo baxaya warar sheegaya in kalluunkii astaanta warshaddan lahaa uu kasoo baxo meelo kale.
Arrintan ayaa lagu qeexay in magacii Warshada laasqoray si been abuur ah loogu adegsaday kaaluun ku jira gasacado, oo ah noocii warshadda lagu yaqaannay.
Sheekadan oo ay dad badan uga hadleen baraha xiriirka bulshada ayaa lagu sheegay in kalluunka sawirradiisa la isla dhex marayo uu kasoo baxo waddanka Thailand oo ka tirsan dalalka qaaradda Aasiya, inkastoo aysan BBC-du xaqiijinin sheegashadaas.
Magaca been abuurka ee lagu sheegay in laga xadayo warshadii laasqoray, ayaa waxaa ka hadalay Cali Maxmud Xassan “Cali Ceelaayo” oo kamid ahaa howlwadeennada warashadda laasqoray, wuxuuna arrintaas ku tilmaay inay tahay xatooyo laguy sameenayo astaantii ganacsiga warshadda.
BBC-da ayuu uga warramay sida ay xogtan ku heeleen: “Mas’uuliyiinta warshadda Laasqoray ayaan ka mid ahaa mana ogi meesha kalluunkaas uu kasoo baxay, laakiin dad arkay ayaa ilasoo xiriiray, oo i weydiiyay in warshadda kalluunkeeda uu hadda soo baxo, waxaana u sheegay in howlihii warshadda ay hakad ku jiraan wax kalluun ah oo ay soo saartay ama ay mar dhow iibisayna aanu jirin, kalluun kasta oo magaceedu ku qoran yahay, oo meel kasta oo caalamka ka mid ah lagu gadana uu yahay been abuur”, ayuu yiri Cali Ceelaayo.
Wuxuu sheegay in isagu uusan arkin kalluunkaas balse ay xogta soo gaarsiiyeen dad jooga dalka dibaddiisa, mar uu arrintaas ka hadlayayna wuxuu yiri: “Meelo ka baxsan Soomaaliya ayay macaamiishii warshadda igala soo hadleen, waxay i dhaheen; ‘kalluun ay ku qoran tahay Laasqoray Tuna ayaa noo yimid, ma idinkaa soo saaray?’, aniguna waxaan u xaqiijiyay in aannaan howsheennii wali dib u billaabin.
Ceelaayo ayaa sidoo kale sheegay in cid walba oo soo saarta kalluun wata astaanta warashaddooda “ay khiyaaneen macaamiisha, warashaddana ay dambi ka galeen”.
“Waddamada Kalluunka Soomaaliya looga keeno waxaa ka mid ah Thailand laakiin anigu ma ogi inay iyada tahay meesha lagu soo sameeyay kalluunkaas astaanka Laasqoray wata. Hadda ka hor dad ayaa Kenya geeyay kalluun laga keenay Thailand oo loo isticmaalay magacii Laasqoray, marka waxaa jira dad jecel inay ka faa’iideystaan tayada kalluunka la jecelyahay ee ay soo saari jirtay warshadda, sidaasna ku isticmaala magaceeda”, ayuu sii raaciyay hadalkiisa.
Previous articleWaa kee waddanka ‘xaday’ magacii warshadda kalluunka ee Laasqoray
Next articleBerbera Warka Munasibada Ciida